I-Apple isungule iividiyo ezintsha zoSuku loMhlaba 2017 | Ndisuka mac
U-Apple uyenzile kwakhona, upapashe iividiyo ezintsha ze Usuku Lomhlaba Ngo-2017 apho abonisa khona, ngokulandelelana kwekhathuni, i-robot ye-LIAM yakhe, phakathi kwezinye iimeko. Njengoko usazi, iApple ibisoloko ithathela ingqalelo into yokuba iimveliso zayo, kunye neenkqubo zayo zokwenza ube luhlaza kangangoko.
Iividiyo esizincamathisela apha ngezantsi sele zikhona kwijelo elisemthethweni lenkampani ye-YouTube kwaye zenziwe, njengoko sikwazile ukufumanisa, ngumlawuli weApple, uLisa Jackson kunye neqela lakhe.
U-Apple wenze iividiyo ezintsha ezinxulumene nokuba inkampani iluhlaza njani xa kuziwa kwindalo esingqongileyo kunye nokuqaqambisa, Kwakhona ukubanakho kwirobhothi yakho yokurisayikilisha ye-LIAM. Ezi ntengiso zenziwe ukuba ziboniswe kwi-Sustainable Brands 2017, inkomfa eyayibanjelwe eDetroit eyazinyaswa ziinkokheli zeshishini ezazibophelela ukongeza ixabiso kwi-brand eziyimeleyo ngozinzo.
Le nkomfa ibizinyaswe ngu Umlawuli we-Apple we-Operations and Initiatives, uSarah Chandler kwaye ijolise kwintetho yakhe ekucaciseni ukuba ngowuphi umceli mngeni olandelayo kwiApple ngokwamaziko ayo emveliso, oko kukuthi, ube nakho ukwenza ikhonkco lonikezo oluvaliweyo, ngaloo ndlela kufikelelwa phantse ku-100% kusetyenziso lwezixhobo zeemveliso ezirisayikilishwe ezilawulayo. U-Lisa Jackson sele etshilo ku-Epreli odlulileyo:
Ngokwenyani senza into esingafane siyenze, Oko kukuthi, ukubhengeza injongo ngaphambi kokuba sifumanise ukuba singayenza njani.
Ke sinoloyiko oluncinci, kodwa sikwacinga ukuba kubaluleke kakhulu, kuba njengecandelo sikholelwa ukuba kulapho iteknoloji kufuneka iye khona.
I-LIAM, irobhothi ebonakalayo, iya kudlala indima ebalulekileyo ekuncedeni iApple iphumeze injongo yayo. I-Apple iceba ukuphinda iteknoloji enjengee-LIAM's, kunye nokomeleza inkqubo yokurisayikilisha Ukuhlaziywa kweapile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple isungula iividiyo ezintsha zoSuku loMhlaba 2017
I-Apple Watch iseyeyona ilungileyo yokubekwa kweliso entliziyweni xa kufikwa kwizinto ezinxitywayo